यौन व्यवसाय पुस्तैनी भएको भारतको बाचरा समुदाय
धेरै भारतीय परिवारहरू अझ पनि छोरीभन्दा छोरा रोज्छन्। तर भारतको मध्य प्रदेशमा हीना जन्मँदा उनका बाबुआमाले उत्सव मनाएका थिए। दुर्भाग्यवश त्यो उत्सव राम्रो कारणका लागि थिएन। हीना मध्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने बाचरा समुदायकी एक सदस्य हुन्। शताब्दी‌‍औँदेखि
सन्दर्भः विश्व हेड इन्जुरी डे २०१९ बाह्य भौतिक बलका कारण मस्तिष्कमा हुने घातलाई ट्रमेटिक मस्तिष्क चोट (टिबिआई) भनिन्छ । यसले व्यक्तिको चेतनाको स्तरमा कमी ल्याई संज्ञानात्मक क्षमता एवं शारीरिक क्रियाकलापमा असर पार्छ । आजकल विकसित र विकासशील
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले न्यूरो सर्जरीको विकास र बिस्तारमा उहाँले पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ । उहाँ दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ठ न्यूरो सर्जनका रुपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । मुलुकमा न्यूरो सर्जरीको आधुनिक विकासमा प्रा.डा. देवकोटाको योगदानलाई अन्य
दृश्य: १ आइतबार बिहान ९ः१५ बजे वीर अस्पताल परिसरको दृश्य हाटबजारको जस्तै थियो । अस्पताल प्रांगणमा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन । अस्पतालसँगै जोडिएको ट्रमा सेन्टरसम्म थियो टिकट काट्नेको लाम । नयाँ, पुराना बिरामी अनि आफन्तको लाम थियो
बैतडीकी १६ वर्षीया एक युवतीलाई आमाको अनुहार कस्तो थियो थाहा छैन । उनका बुबा उनकी आमासँग बिहे हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा थिए । बुबाले काम गर्ने क्रम मै भारतीय मूलकी महिलासँग बिहे गरे । भारतमै
क्रिटिकल केयरका नर्सले बिरामीलाई बाबु, आमा, दिदिबहिनी, दाजुभाइ सम्झेर हेरचाह गर्नुपर्छ । उनीहरुको भित्री मनदेखि नै सेवा गर्ने भावना आउनुपर्छ बिरामीलाई आई.सी.यू.मा ल्याइसकेपछि सम्पूर्ण रेखदेखको जिम्मा नर्सको हातमा हुन्छ । क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने नर्स शान्त स्वाभावको